'मोदीजीसँग केमेस्ट्री मिल्छ' प्रचण्डले हिन्दूस्थान टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्ताको अनुवाद
‘मोदीजीसँग केमेस्ट्री मिल्छ’ प्रचण्डले हिन्दूस्थान टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्ताको अनुवाद
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय पत्रिका हिन्दूस्थान टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद् । यहाँ केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ अनुवाद गरिएको छ । पूरा अन्तर्वार्ता पढ्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।
तपाइँ नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउने नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ । नेपालमा पछिल्लो २५ वर्षमा १८ वटा सरकार आयो, गयो । राजतन्त्रको अन्य भएपछि नेपालमा ९ वर्षमा ८ जना प्रधानमन्त्री फेरिए । तपाइँहरुको लोकतन्त्र के सही दिशामा गइरहेको छ ?
तपाइँले जुन प्रश्न अघि सार्नुभयो, यो मेरो दृष्टिमा निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ । यस समय नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । हामीले शान्ति सम्झौता गरेर निकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको भार उठायौँ । यसलाई स्थिर गर्नका लागि निकै मेहनत जरुरी छ । शान्ति सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा युद्धरत पक्षलाई यो प्रक्रियामा सामेल गर्नु तथा हतियार व्यवस्थित गर्नु थियो । यो निकै जटिल कुरा हो । जुन हामीले सफलतापूर्वक गर्‍यौँ । यसपछि ९ वटा सरकार बन्यो या ८, यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । यस दौरान निकै चुनौतीको बीचमा हामीले संविधान पनि जारी गर्‍यौँ । अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । स्थिति त्यतिधेरै निराशाजनक पनि छैन, जति तपाइँको प्रश्नमा झल्किन्छ ।
क्रान्तिपछि कतिपयलाई लागेको थियो कि तपाइँ दक्षिण एसियाको नेलसन मण्डेला बन्दै हुनुहुन्छ, तर त्यसो हुन सकेन । कहाँनेर गल्ति भयो ?
हाम्रो शान्ति प्रक्रिया निकै अनौठो छ । हाम्रो र नेलसन मण्डेलाको आन्दोलनबीच समानता र कैयन असमानता पनि छन् । समय फरक छ र मूल सिद्धान्तमा पनि भिन्नता छ । जसरी शान्ति सम्झौता गरेर हामी अघि बढेका छौँ, यो अन्तराष्ट्रिय साम्यवादी आन्दोलनका लागि पनि अनौठो कुरा हो । यो निकै ठूलो प्रयोग पनि हो । माओवादी आन्दोलनलाई सरकारसम्म पुर्‍याउन निकै ठूलो जोखिम थियो ।
तपाइँहरुले एउटै ‘लाल झण्डा’मुनि रहेर आन्दोलन गर्नुभयो । आज कम्युनिष्ट पार्टीमा फुट आएको छ । मत भिन्नताहरु देखिएका छन् । यसलाई जोडेर राख्नका लागि के गर्नुपर्छ ?
यो एक ठूलो प्रयोग हो, त्यसैले बहस हुनु त स्वभाविक नै हो । यसलाई जसरी एकीकृत राख्नुपर्ने थियो, त्यसमा हमी सफल हुन सकेनौँ । पार्टीमा फुट आयो । विभाजनको श्रृंखला देखियो । अलग भएका समूहहरुलाई एकीकृत गर्नका लागि हामीले ‘माओवादी केन्द्र’ नामको पार्टी बनाएका छौँ । सबैको सोचमा समानता ल्याएपछि यो सम्भव भयो । मेरो नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु भयो । दश वर्षसम्म लडाइँ चल्यो । फेरि मेरै नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भयो । पहिलो चुनावमा मेरो पार्टी पहिलो भयो । मलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्ने अवसर पनि मिल्यो । मेरै नेतृत्वमा पार्टी विभाजन पनि भयो । फेरि मेरै अगुवाईमा एकता प्रक्रिया चल्यो । अहिले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गरिरहेको छु । २०/२५ वर्षको बीचमा यति धेरै राजनीतिक बदलाव र उतारचढाव निकै कम देख्न पाइन्छ । नेपालमा हामी जे गरिरहेका छौँ, संकटकालदेखि शान्ति, फेरि सरकारको नेतृत्व, फेरि विभाजन अनि एकता त्यो पनि एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा । मलाई लाग्छ यहाँ नेतृत्वको एउटा मोडल तयार भइरहेको छ ।
तपाइँ भारत जाँदै हुनुहुन्छ, यो यात्राबाट के आशा राख्नुभएको छ ?
भारतसँग विश्वासको वातावरण मजबुत बनाउनु जरुरी छ । नेपाल-भारत सम्बन्धको दृष्टिले गएको वर्ष राम्रो रहेन । यस दौरान आपसी शंका र भ्रमले ठूलो भूमिका खेल्यो । संविधान घोषणाका दौरान भएको नाकाबन्दीले जनजीवनमा निकै ठूलो असर पर्‍यो । मलाई लाग्छ, अब सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा आउँदैछ । मेरो भारत भ्रमण मुख्य उद्देश्य यही हो कि, ‘दुई देशबीच नयाँ विश्वासको वातावरण बनोस् ।’ यसका लागि यो भ्रमण ‘गुडविल भिजिट’जस्तो हुनेछ । जुन हिसाबले तयारी भइरहेको छ, मलाई लाग्छ यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा ऐतिहासिक हुनेछ ।
म पहिले पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत गएको थिए । तर त्यतिबेलाको मेरो पार्टीको स्थिति, देशको तत्कालीन अवस्था र आजको अवस्थामा निकै अन्तर छ । त्यतिबेला युद्ध र क्रान्तिको जबरदस्त असर मेरो दिमागमा थियो । राजनीतिक मिजासलाई राम्रोसँग बुझ्नका लागि मलाई समय आवश्यक थियो । यो १० वर्षमा जुन राजनीतिक उतारचढावबाट गुज्रिएको छु, त्यसबाट पनि मलाई लाग्छ अब म ज्यादा परिपक्वताका साथ दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रयास गर्न सक्नेछु ।
हाम्रो भारतमा अहिले निकै मजबुत सरकार छ । सरकारलाई पूर्ण बहुमत प्राप्त छ । मोदीजीको एउटा आफ्नै तरिका पनि छ, जुन स्पष्ट छ । तपाइँको नजरमा पीएम मोदी कस्ता नेता हुन् ?
मोदीजी र मोरो सोच्ने तरिका र केमेस्ट्रीमा काफी समानता छ । यद्यपी परिस्थिति र विचारमा केही भिन्नता छ, त्यो अलग कुरा हो । उहाँ विशाल भारतको बहुमतप्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । पहिलोपटक जब मोदीजी नेपाल आउनुभयो र संसदमा संबोधन गर्नुभयो, त्यतिबेला पनि हाम्रो कुराकानी भएको थियो । नेपालको इतिहासमा यस्तो निकै कम भएको छ कि छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री आएर सर्वसाधारणमा त्यति धेरै उत्साह भरिदिएको होस् । हाम्रो पहिलो भेट निकै सौहार्दपूर्ण भएको थियो । दोस्रो पटक पनि निकै कुराकानी भयो । मोदीजीप्रति मेरो र नेपाली जनताको एक प्रकारको भरोसा छ । अब यो विश्वासलाई मजबुत बनाउन हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहनेछ ।
केही व्यक्तिगत प्रश्नहरु:
फिट रहनका लागि के गर्नुहुन्छ ?
हरेक दिन बिहान व्यायाम गर्छु ।
जिम गर्नुहुन्छ कि वाक ?
थोरै योगा गर्छु । टेबुल टेनिस पनि खेल्छु ।
मन पर्ने खाना के हो ?
मलाई नेपाली खाना, दाल-भात मनपर्छ ।
भेजिटेरियन कि ननभेज हुनुहुन्छ ?
मन पर्ने पोशाक ?
अहिले जुन लगाएको छु । (सर्ट, पाइन्ट र नेपाली टोपी)
परिवारका लागि कसरी समय निकाल्नुहुन्छ ?
जनयुद्धमा भूमिगत छँदा हामी अलग-अलग रहन्थ्यौँ । तर अहिले परिवारको साथमा छु । छोराछोरी पनि राजनीतिमा छन् । मेरी पत्नी केन्द्रीय सल्लाहकार हुन् । हामी सबै एकसाथ काम गर्छौँ ।
तपाइँको मनोरञ्जनको साधन ?
विद्यार्थी जीवनमा सिनेमा हेर्थेँ ।
कुन हिरो मन पर्छ ?
सबैलाई हेर्छु । तर तपाइँले भारतको सोध्दै हुनुहुन्छ कि नेपालको ?
भारत … ।
भारतको कुरा गर्ने हो भने त अमिताभ बच्चन मलाई मन पर्थ्यो ।
अनि हिरोइन ?
यसमा ध्यान दिइन ।
पूरा अन्तर्वार्ता हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।